Olee otú iji tọghata WMV ka MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) na Mac / Windows
WMV bụ a na-ewu ewu video format eji na Windows OS, nke bụ ukwuu dakọtara na a sistemụ ruru otu Mmepụta ha nwere. Mgbe MPEG (makwaara dị ka mpg), ọzọ faịlụ Ọkpụkpọ, bụ faịlụ ndọtị nke MPEG-1 na MPEG-2, tumadi ji maka azọpụta media datas maka TV, DVD na na. MPEG, na ụfọdụ ebe, nwere ike ghọtara site ọzọ ngwa ọdịnala dị ka QuickTime. Gụọ ihe ndị na ọdịiche dị n'etiti MPEG usoro.
Isiokwu a bụ ihe niile banyere converting WMV ka MPEG na Mac OS na Windows os. Iji nọgide na-enwe video àgwà na rụchaa ọrụ ngwa ngwa, anyị nwere họrọ ndị kasị mma WMV ka MPEG Ntụgharị maka gị. Dị nnọọ nweta ya n'okpuru.
Part 1: Best WMV ka MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) Video Ntụgharị
Part 2: Free WMV ka MPEG Ntụgharị &
Nkebi nke 3: Online WMV ka MPEG Ntụgharị
Nkebi nke 4: FAQs banyere converting WMV ka MPEG
150+ Video Format: Ọ na-akwado converting MPEG, MKV, MOV, MP4, AVI na ndị ọzọ formats ka WMV.
High mmepụta Qualilty: tọghata WMV ka MPEG enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ na na elu definition.
Ọkụ DVD: Ọkụ video ka DVD disk, gị na-anọkọ DVD masterpiece na ndị enyi gị.
Bara uru edezi arụ: Dezie videos na oké video edezi ọrụ dị ka trimming, merging, na-agbakwunye mmetụta na ndị ọzọ.
Donwload Online Videos: Donwload videos si ọtụtụ ewu ewu video nkekọrịta saịtị dị ka YouTube, Facebook, wdg
Rịba ama: The esonụ omume na-egosi gị otú ị tọghata WMV ka MPEG na Windows, na ime WMV ka MPEG Mac ọrụ, i nwere ike ịgụ a: User Guide nke Video Ntụgharị maka Mac (Mac OS X 10,11 El Capitan, 10.10 Mavericks gụnyere).
Olee otú iji tọghata WMV ka MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) Wondershare Video Ntụgharị
1. Import videos ka WMV ka MPEG Ntụgharị
Gbaa ndị WMV ka MPEG video Ntụgharị, pịa "Tinye Files" na ịgbakwunye videos ị chọrọ iji tọghata. Iji tinye WMV faịlụ ka usoro ihe omume, ị nwekwara ike ịdọrọ & dobe gị faịlụ ka WMV ka MPEG Ntụgharị. Ịzọpụta gị oge, ogbe akakabarede na-akwado nke mere na ị nwere ike mbubata karịa otutu mgbasa ozi faịlụ n'ime software maka converting.
2. Set MPEG-1 ma ọ bụ MPEG-2 ka mmepụta formats
Pịa "mmepụta Format" oyiyi icon wee họrọ MPEG dị ka mmepụta usoro.
Cheta na: I nwekwara ike ịhụ optimizations maka obere ngwaọrụ site clicing gia bọtịnụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-agbalị iji tọghata WMV ka iPhone video formats, ị nwere ike họrọ nri njikarịcha maka iPhone na ịtọ mmepụta profaịlụ dị ka nke a:
3. Malite iji tọghata WMV ka MPEG
Pịa "tọghata", na ike nke WMV ka MPEG conversions ga-agwụ agwụ-akpaghị aka. Ị nwere ike ịchọta converted videos site na ịpị "Open nchekwa".
Part 2: More nhọrọ nke free YouTube ka WMV Ntụgharị
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free WMV ka MPEG Ntụgharị
Nke a free WMV ka MPEG Ntụgharị-ahapụ gị free tọghatara WMV ka MPEG, dezie WMV videos tupu akakabarede na nwekwara ike ibudata vidiyo si na ọtụtụ ndị na saịtị.
Pro: 100% free WMV ka MEPG akakabarede ngwá ọrụ na video Downloader
1. The converted video àgwà bụghị dị ka ihe ọma dị ka Video Converter Ultimate.
2. DVD ọkụ ọrụ adịghị.
3. Ọ nwere ike na na-eji iji tọghata video ka nkịtị video, mgbe Video Converter Ultimate ike ga-eji iji tọghata HD na 3D videos.
Nkebi nke 3: Online YouTube ka WMV Ntụgharị
1. m mere ka a video na m Windows Movie kere ya. Olee otú m pụrụ igwu egwu WMV faịlụ na m DVD / VCR ọkpụkpọ.
Iji kpọọ vidiyo na DVD / VCR ọkpụkpọ, mbụ ị mkpa iji tọghata WMV faịlụ ka MPEG, usoro competible na ngwaọrụ gị.
Na-agbalị nnọọ na video converters n'elu idozi nsogbu gị ozugbo o kwere omume. Ọ bụrụ na ị chọrọ enwe elu difinition videos-eji ire ụtọ playback ahụmahụ, ị ga-mma na-agbalị Wondershare Video Converter Ultimate.
2.I'm eche otú iji tọghata DVD nkiri na a WMV ma ọ bụ MPEG otú m nwere ike Email ha ma ọ bụ dezie ha na a Movie Onye kere usoro.
Ọ dị mfe ịrụcha ya elu. Na-agbalị nnọọ a video akakabarede ngwá ọrụ iji tọghata videos ka MP4, kasị ukwuu dakọtara format na ọtụtụ ngwaọrụ na ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-looing ihe free. The Wondershare WMV ka MPEG Ntụgharị FREE nwere ike ịbụ gị nhọrọ kasị mma. Ị nwere ike iji iji tọghata DVD nkiri na AVI, MKV, MP4, WMV, MOV na ndị ọzọ na-ewu ewu video formats.
3. Enwere freeware iji tọghata WMV faịlụ-arụ ọrụ na iTunes, Mac na iMovie.
Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịdị mkpa ka nwere WMV faịlụ-arụ ọrụ na Windows OS na na na gị iTunes, Mac OS ma ọ bụ iMovie. Iji rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè dozie nsogbu gị, dị nnọọ ewe otu nke video converters n'elu na tọghata WMV ka MOV ma ọ bụ MP4, usoro dakọtara na niile atọ ahụ.
4. Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, na MP4.
MPEG-1 bụ n'oge ọgbọ nke akpa faịlụ (nke jide video / audio) na video / audio codecs. Ị ga-ahụ ndị a na ochie 'multimedia CD' na dị ka .mpg faịlụ na internet.
MPEG-2 bụ a mesịrị ọgbọ, na MPEG-2 faịlụ ndị kama ibu, n'ihi ya, ha na-akasị ji na elu ọgwụgwụ video edezi. MPEG-2 bụ nwa afọ usoro na DVD.
MPEG-3 e kwụsịrị, na mgbe na wepụtara.
MPEG-4 bụ ọhụrụ ọgbọ, na-ahụkarịkwa na weebụ. DivX na XviD ndị kasị mma MPEG-4 video encoders (AVI containers). MP4 na MPEG-4 bụ otu. MP4 bụ afo nke MPEG-4.
Olee otú encode AVI Files na AVI Encoder
Youtube Video teepu: Olee weghara YouTube Videos
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata WMV ka MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) na Mac / Windows